Waa maxay Naqshadaynta Websaydhka? RWD
Tuesday, April 28, 2020 Sabti, Febraayo 27, 2021 Douglas Karr
Waxay qaadatay toban sano naqshadeynta websaydhka (RWD) si guud loo maro tan iyo Cameron Adams ayaa markii ugu horreysay soo bandhigay fikradda. Fikraddu waxay ahayd mid xariif ah - maxaanan u qaabeyn karin goobo la jaanqaadi kara aragtida qalabka uu ka muuqanayo?
Waa maxay Naqshadaynta Jawaabtu?
Naqshadeynta websaydhka jawaabta leh (RWD) waa qaab naqshad websaydh ah oo loogu talagalay in lagu farsameeyo baraha si loo siiyo khibrad daawasho fiican - akhris fudud iyo hagitaan leh ugu yaraan cabbirka, digniinta, iyo wareejinta — qalab kala duwan oo fara badan (laga bilaabo taleefannada gacanta illaa kombuyuutarka miiska) kormeerayaasha). Goob loogu talagalay RWD waxay la jaanqaadeysaa muuqaalka jawiga daawashada iyadoo la adeegsanayo dheecaanno, shabagyo ku saleysan saami, sawirro dabacsan, iyo weydiimaha warbaahinta ee CSS3, kordhinta xukunka @media.
Si kale haddii loo dhigo, walxaha sida sawirada waa la hagaajin karaa iyo sidoo kale qaabka astaamahaas. Halkan waxaa ah fiidiyow sharxaya waxa naqshadeynta jawaabta ah ay tahay iyo sidoo kale sababta shirkaddaadu ay u fulinayso. Waxaan dhawaan dib u horumarin ku Highbridge goobta si looga jawaabo oo hadda ay ka shaqeynayaan Martech Zone si la mid ah u sameeyo!
Habka loo dhisayo jawaabta goobta waa wax yar oo caajis ah maadaama aad u baahan tahay inaad yeelato kala-sarreeyn qaababkaaga ah oo loo abaabulay iyadoo lagu saleynayo cabirka muuqaalka.
Browsers-ka ayaa iskood uga warqabaya cabirkooda, sidaa darteed waxay ku dhejinayaan xaashida qaab-dhismeedka kor ilaa hoos, iyagoo weydiinaya qaababka ku habboon cabbirka shaashadda. Tani macnaheedu maaha inaad naqshadeyso waraaqaha qaababka kala duwan ee shaashad kasta oo cabbir ah, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad u wareejiso walxaha lagama maarmaanka u ah.
Ku shaqeynta maskaxda-ugu horreysa maskaxda waa heerka aasaasiga ah maanta. Noocyada ugu-fiican-fasalka ayaa ka fikiraya oo keliya in boggoodu yahay mid mobiil-saaxiibtinimo ah laakiin ku saabsan khibradda macaamiisha oo buuxda.
Lucinda Duncalfe, Maamulaha guud ee Monetate
Waa kuwan faahfaahin ku saabsan Monetate oo muujinaya faa'iidooyinka ka iman kara abuurista hal naqshad wax ku ool ah oo loogu talagalay qalab badan:
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku aragto goob jawaab celin ah oo ficil ah, tilmaam adiga Google Chrome biraawsar (Waxaan aaminsanahay Firefox inuu leeyahay isla muuqaalka) inuu Highbridge. Hadda dooro Eeg> Horumariye> Qalabka Horumarinta ka timid liiska. Tani waxay ku shubi doontaa farabadan qalab hoosta biraawsarka. Dhagsii astaanta yar ee mobilka ee bidixda bidix ee baalka makiinadaha Qalabka Kobcinta.
Waxaad u adeegsan kartaa xulashooyinka hagidda dusha sare si aad u beddesho aragtida muuqaalka illaa sawirka, ama xitaa xulo tiro kasta oo ah cabirrada muuqaalka horay loo sii qorsheeyay. Waxaa laga yaabaa inaad dib u cusbooneysiiso bogga, laakiin waa aaladda ugu fiican adduunka ee lagu hubinayo goobahaaga jawaabta iyo hubinta in bartaadu u muuqato mid ku fiican dhammaan qalabka!
Tags: Cameron adamsvideo sharaxewebsaydhka jawaabta lehNaqshad wax ku ool ahnaqshadeynta naqshadeynta jawaabta ahinfographic jawaab celin ahNaqshadeynta moobiilkanaqshadeynta websaydhkarwdwaa maxay naqshadeynta jawaabtawaa maxay naqshadeynta websaydhkawaa maxay rwd
Kala duwanaansho 23
Naqshadeynta websaydhku ma aha xulasho maamuleyaasha websaydh dambe, hadda waa ku khasab iyaga. Waad ku mahadsantahay wadaagida qoraalkan macluumaadka.
Jun 2, 2021 saacadu markay ahayd 6:04 AM
Aad baad ugu mahadsantahay Douglas qodobkan sifiican loo sharaxay. Waa inaan ku raacsanahay tan inkasta oo dhinaca waxyaabaha ka kooban. Inta badan boggaga aan ka sameyno qaab-dhismeedka jawaabta kuma filnaan doono. Waxaan ubaahanahay nuxur jawaab leh. Laakiin shabakadaha aasaasiga ah waxaan hubin doonnaa inaan u adeegsanno maqaalkaaga si wanaagsan loo diiwaangeliyey ee ku saabsan sida loo maareeyo tan!
Waxaan u maleynayaa inaad gabi ahaanba sax tahay, Aaron. Kuma filna kaliya in wax laga beddelo oo wax la dhaqaajiyo… waxaan runtii u baahanahay inaan ka faa'iideysanno waxyaabaha ku jira sidoo kale.